मूल्य रु. ८९०/-
भुँडीपुराण प्रकाशनको “नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली काङ्ग्रेस (भाग ९)” डा. राजेश गौतमद्वारा तयार पारिएको ऐतिहासिक पुस्तक हो।
यस पुस्तकमा नेपाली काङ्ग्रेसको निर्वाचित सरकारदेखि मध्यावधि निर्वाचन २०५१ सम्मको घटनाक्रम समावेश गरिएको छ।
“साथीहरूलाई यहाँ मा एउटा कुराको स्मरण गराउन चाहन्छु। २०४६ सालको जनआन्दोलन लगत्तै अघिको माघ ५, ६, र ७ को क्षेत्रपाटी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दा मैले अध्यक्षको आसनबाट बोल्दै भनेको थिएँ, मेरो जीवनको चरम लक्ष मुक्ति हो। त्यसबेला मैले त्यतिमात्र नेपाली जनता र साथीहरूलाई सार्वजनिक रूपले बताउन निश्चय गरेका कारण देशको इतिहासमा एक निर्णायक अवसर आएको हुनाले हो।”
“तर नेपाली जनताको भौतिक बन्धनबाट मुक्ति र मेरो अत्यधिक मुक्तिको बाटोमा सबभन्दा तगारो देशवासीको स्वतन्त्रताको २०१७ सालमा भएको अपहरण थियो। आफ्नो जीवनका सर्वोच्च वर्षहरु यस सङ्घर्षमा प्रारम्भदेखि नै लगाइएकाले मलाई यसका प्रति विशेष ममताका साथै यसको प्रविधिको पनि ज्ञान थियो। इतिहासले यसको प्रयोगको अत्यन्त उपयुक्त अवसर प्रदान गरेको थियो।”
“जनआन्दोलन सफल भयो, जनता विजयी बने, अन्तरिम सरकार कायम भयो, नयाँ संविधान आयो, निर्वाचन भयो, हामीले बहुमत पायौं र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अहिले प्रथम महानिर्वाचनको अढाई वर्षपछि पुन: सोही स्थानबाट मा पराजित भएँ। यसका कारणहरूको खोज अवश्य पार्टीले उपयुक्त तरिकाले गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। तर यसमा कुनै किसिमको निरर्थक आक्रोश, पूर्वाग्रह र द्वेषको भावना रहने छैन। यसबारे मा सम्पूर्ण रूपले विश्वस्त छु।”
Tagged bhundipuran, congress, history, nepali congress, आन्दोलन, इतिहास, काङ्ग्रेस, नेपाल, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली काङ्ग्रेस (भाग ८), नेपाली, नेपाली काङ्ग्रेस, प्रजातान्त्रिक, भाग ९, साहित्यिक, साहित्यिक पुस्तक
Previous Previous post: सफलताको रहस्य
Next Next post: बेमौसमी भाउजू